Abuuritaanka shirkad ganacsi waa la dardargelin karaa haddii aad isweydiiso su'aalaha saxda ah. Habka halkan lagu soo bandhigay waa isku-darka 6 sano oo taageero ah oo ku dhowaad 400 oo bilow ah wuxuuna ku saleysan yahay gunaanadka warbixinta "Startup Genome" oo daraasad ku sameeyay "DNA" guud ee bilowga badan ee soo maray guul iyo guuldarro.
Agaasimihii hore ee Xarunta Innovation Microsoft ee Wallonia (oo loo doortay adduunka ugu fiican MIC 2010 adeegyadii loo fidiyay ganacsatada barnaamijkiisa "Boostcamp"), Ben Piquard wuxuu halkan ku siinayaa qaab habeysan oo ka turjumaya tayada mashruucaaga:
- Qaab-dhismeedka aragtiyeed ee milicsiga, 5 cabbirka muhiimka ah ee guusha
- Rooti / Badeecad
- Qaab Ganacsi (iyo Kartoonka Beerta P & L)
- Farshaxanka Farshaxanka
Mashruucayga Bilaabashadu miyuu taagnaadaa? Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Sidee looma illaawin luuqad?
horeU horumariso iibintaada si joogto ah: Laga bilaabo 0 illaa 1
socdaAbuur ganacsi faa'iido leh dhaqso (40 qorshe hawleed)
Weydii su'aalaha iibka ee khuseeya